Shikhar Samachar | लडकाउनको एक महिना पूरा, ४५ संक्रमित मध्य ७ जनाले जिते कोरोना लडकाउनको एक महिना पूरा, ४५ संक्रमित मध्य ७ जनाले जिते कोरोना
लडकाउनको एक महिना पूरा, ४५ संक्रमित मध्य ७ जनाले जिते कोरोना
नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ४५ पुगेको छ । बुधबार धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण गरिएका ‘पीसीआर’ नमुनामध्ये तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या ४५ पुगेको हो ।
थपिएकाहरु तीनैजना पुरुष हुन् । २४ वर्षीय, ६० वर्षीय र ७२ वर्षीय पुरुष संक्रमित भएका हुन् ।
संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
त्यसैगरी, अहिलेसम्म सातजना उपचारपछि निको भइ घर फर्केका छन् ।
बुधबार टेकु अस्पतालबाट ३२ वर्षीय पुरुष र सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट ४० वर्षीय पुरुष गरी दुईजना ‘डिस्चार्ज’ भएका छन् ।
मंगलबार सेती अस्पतालबाटै २७ वर्षीय एक युवक डिस्चार्ज भएका थिए ।
अहिलेसम्म पीसीआरबाट ९ हजार ११ जनालाई परीक्षण गरिएको डा. देवकोटाले बताए ।
त्यस्तै, ‘आरडीटी’बाट ३१ हजार ४२० गरी जम्मा परीक्षणको संख्या ४० हजार ४३१ पुगेको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घन्टामा तीन हजार ७३६ ओटा परीक्षण गरिएको पनि बताएको छ ।
८ हजार ५९५ जना ‘क्वारेन्टाइन’मा रहेका बताउँदै डा. देवकोटाले काठमाडौंमा तीनसहित देशभर ९५ जना ‘आइसोलेसन’मा रहेका जानकारी दिए । हाल २६९ जना ‘रेड जोन’मा परेका छन् ।
उदयपुरमा मात्रै २७ संक्रमित
दयपुरको भुल्के मस्जिदबाट सबैभन्दा पहिलोपटक स्वाप नमुना परिक्षण गरिएको १६ जना सबैमा कोरोना पोजेटिप पुष्टि भयो । यसअघि १३ जनाको पुष्टि भइसकेको थियो भने आज बाकी ३ जनाको पनि पुष्टि भएको हो ।
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लडकाउन घोषणा गरेको आज एक महिना पूरा भएको छ ।